Miyuu yar yahay qiimaha adeegyada SEO ee ganacsiga yaryar?
Iyadoo "qiimo hooseeya SEO = khatarta" waa khuraafaad ka badan bayaan dhab ah, kiisaska SEO xun xun qiimo raqiis ah ma aha wax aan caadi ahayn. Ganacsatada yaryar waxay si gaar ah ula xiriiraan dhibaatadan maadaama hay'adaha SEO-yada ah ay inta badan bartilmaameedsanayaan shirkadaha maxaliga ah iyo qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaashu ay aad u soo jiidanayaan dukaamada iyo goobaha isku daya inay dhiirrigeliyaan naadiyada tartamaya.
Ka dib qiimayaasha hooseeya ee SEO waxay bixisaa indho indheyn u keeni kara cawaaqibyada:
Ganaaxa sabab u ah Black Hat SEO. Wakaalado badan oo SEO ah oo si cad u jebiya jihooyinka Google ee leh ereyada muhiimka ah, qoraallada qarsoon, albaabbada iyo hababka xun xun sida caadiga ah waxay bixiyaan qiimo hooseeya adeegyadooda. Tani waa qeyb ka mid ah dabaqadoodu: waxay ballanqaadayaan kor u kaca xoog leh ee qiimaha soo jiidasho leh waxayna keenaan ballanqaad ballan qaad ah. Siyaasaddaani waxay u keentaa qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha goobta aan la ogayn oo aan ogeyn in koritaanka xulashada laga helay Black Hat SEO waa ku-meel-gaar ah iyo dhibic weyn lama huraan.
Duufaan. Mararka qaar, waxaad helaysaa qiimo jaban adeegyada SEO ee ganacsiga yaryar ama shirkado waaweyn oo aan ahayn Black Hat. Taa baddalkeeda, waxay ku xaddidan yihiin fursadaha dhiirigelinta iyo dhammaan talaabooyinka waxaa sameeya koox aan la aqoon. Sidaa darteed, ka dib markaad gaarto meel gaar ah, ololehaagu wuxuu qabaa uun halkaa oo adigu adigu adigu ma ogaan kartid halka aad ka aadi kartid. Sidoo kale waxa laga yaabaa inaanay haysan hababka lagu hormarin karo, sicir hooseeya = mushaarka hooseeya.
Tayada tayada liidata. Mawduuca wuxuu ka ciyaaraa qeyb weyn oo ah ereyada muhiimka ah, qaabeynta isku-xirka iyo heerka kordhinta kordhinta. Si kastaba ha noqotee, haddii mawduucaagu aanu ku habboonayn, mid gaar ah ama xiiso leh inuu akhriyo, galinta ereyada muhiimka ah iyo isku xidhnaantu ma kordhin doonaan darajooyinkaaga. Nasiib darro, nuqulka qoraalka ah waxaa ku jira qiimo jaban adeegyada SEO ee ganacsiga marar dhif ah ayaa muujinaya cilmi-baaris iyo xoojin sida kooxda sida caadiga ah ka maqan qorayaasha qibradaha leh. Sidaa darteed, ha ka filan natiijooyinka aad ka heshay content aad bixisay $ 10.
Macluumaadkan micnaheedu maaha inaad iska ilaaliso "qiimo jaban" iyo "raqiis" SEO ah wax kasta oo kharash ah. Waxa ay tahay inaad samayso, waa inaad ka warqabtaa halista ku jirta markaad raadineyso qiimaha hooseeya ee SEO ee ganacsigaaga yar. Caqli-gal ah ma aha mid had iyo jeer raqiis ah, iyo siyaasadda sicirka sicirka ma aha isku midka ah ee macaamilka. Inkastoo ay jiraan hay'ado xun, oo sumcadda sumcadda shirkadaha SEO-ga ku burburin doona, waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho kala sooca.
Qiima jaban oo la awoodi karo: waa maxay farqiga?
Waxaa suurtogal ah in la helo SEO wanaagsan oo qiimo ku filan oo laga helo hay'ado tayadoodu hooseeyso. Uma baahnid in aad noqoto Guri SEO ah ama aad haysato qalab digniin ah. Cilmi-baaris ballaaran ayaa ka badan kan ku filan.
Ka samee liiska hay'adaha SEO, kuwaas oo bixiya caawimaad qiimo jaban ee ganacsiga yar yar ee internetka;
Isbarbardhig kharashka iyo noocyada adeegyada ay bixiyaan qiimahaas;
U fiirso sida ay isu dhiirrigeliyaan: haddii ay ku ballanqaadaan natiijo degdeg ah iyo kuwo aad u sarreeya, balanqaadyadooda waxay u badanyihiin inay waxtar u yeeshaan;
Eeg in hay'adaha oo idil ay haystaan ​​faylalka. Shirkadaha ka baxa hal la'aan. Ka dibna barta mashaariicda shirkadaha ay ka shaqeynayaan si ay u qiimeeyaan khibradooda. Waxaad sidoo kale booqan kartaa boggaga hay'adaha ay sameeyeen SEO si ay u arkaan sida ay ugu fiicanyihiin kooxahooda.
La xiriir khabiirada hay'ad kasta oo fiiri nooca sawirada ay sameeyaan, ha ahaadeen kuwo kalsooni leh ama si qarsoodi ah, qarsoodi ah, iyo si degdeg ah si aad uga iibsato alaabteeda. Weydii su'aalo kuwaas oo muujin doona aqoontooda nidaamka Google, habka kobcinta iyo farsamooyinka SEO. Ma waxay si dhaqso ah kuugu ballan qaadaan natiijooyinka adiga oo aan wax dheeraad ah ka weydiin boggaaga? Ma waxay xoogga saaraan tirada iyo natiijooyinka mudada gaaban?
Baro taariikhda iyo dabeecadda shirkadda. Iyadoo hay'adaha leh 5 sano oo waayo-aragnimo ah ay yihiin kuwo la doorbido, ha ha ahaadaan kuwo degdeg ah si ay u tuuraan shirkadaha 1-3 sano jirka ah. Shirkado badan oo dhalinyaro ah ayaa waxaa aasaasay khabiiro khibrad u leh ganacsiga muddo 10 sano ah. Tilmaamahan waa in sidoo kale lagu sheegaa bini'aadamka iyo blogka haddii uu jiro mid.
Hubi dib u eegista. Badanaa, dhammaan shirkadaha la aamini karo waxay dib u eegis ku sameeyaan boggooda ama waxay leeyihiin koonto shabakadaha dib u eegista si ay u ogolaadaan in dadka isticmaala ay ka baxaan jawaab celinta. Haddii hay'ad, oo bixisa adeegyo qiimo jaban oo SEO ah ee ganacsiga yar yar ee internetka looga faaideysto faragelinta faallooyinka, maahan inay tahay mid ammaan ah.
Maalmahan, shirkadaha SEO ayaa soo galaya noocyo kala duwan waxayna u hoggaansamaan siyaasadooda qiimaha kala duwan. Sidaa darteed, halkii si degdeg ah looga leexan lahaa kooxaha SEO, kuwaas oo ku siinaya xal aan qaali ahayn, samee cilmi-baarista oo aad aragto dheelitirka dhabta ah ee qiimaha iyo tayada Source . Waxaa kale oo laga yaabaa in aad ka maqnayd qaar ka mid ah heshiisyo cajiib ah!